ओम्नीको बिचौलिया युवराज शर्माको अर्कोधन्दा : लकडाउनमा विद्यार्थीसँग शुल्क असल्न उर्दी ! | Diyopost
ओम्नीको बिचौलिया युवराज शर्माको अर्कोधन्दा : लकडाउनमा विद्यार्थीसँग शुल्क असल्न उर्दी !
२०७७ जेठ ६ मा प्रकाश
काठमाडौं, ६ जेठ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संभावित महामारी रोक्न सरकारले मुलुकलाई विगत ५७ दिनदेखि बन्दाबन्दी अवस्थामा राखेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यो अवधिमा अनलाइक कक्षा देखि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीको भर्ना शुल्क उठाउन मात्रै होइन अलाइन कक्षा नै निषेध गरेको छ । तर, मन्त्रालयको निर्देशन बिपरित लकडाउनको समयमा हिमालयन ह्वाइट हाउस वल्र्ड स्कुलले विद्यार्थी र अविभावकलाई वार्षिक शुल्क बुझाउन र पुस्तक किन्न दबाव दिएको छ ।
बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा नामक कन्सल्टेन्सीका मालिक समेत रहेका युवराज शर्मा यसअघि विवादित मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका पात्र हुन् ।
ओम्नी नामक कम्पनीले खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा अनियमितता भएपछि सञ्चार माध्यमले शर्मा नै प्रमुख अभियुक्त रहेको खबर छापेका थिए ।
उनै शर्मा हिसानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मात्रै होइनन् उनै अध्यक्ष एवंव प्रिन्सिपल रहेको राजधानीको तिनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाइट हाउसले अभिभावकलाई वार्षिक शुल्कबापत रकम तिर्न दबाब दिएको पाइएको छ ।
शनिबार कक्षा ७ सम्म भएको अनलाइन बैठकमा विद्यालयका निर्देशक नारायण काफ्ले र प्रिन्सिपल शर्माले अभिभावकलाई जसरी भएपनि वार्षिक शुल्क तिर्न दबाब दिएको पाइएको हो । विद्यालयले एक सातादेखि विभिन्न कक्षाका अभिभावकसँग अनलाइन बैठक गरेर एक साताभित्र शुल्क तिर्न दबाव दिँदै आएको स्रोतको भनाइ छ ।
विद्यालयले अभिभावलाई एक दुई दिनभित्र शुल्क तिर्न दबाब दिएको एक अभिभावकले वताए । विद्यालय प्रशासनले सबै अभिभावकलाई विद्यालयको खातामा जम्मा गर्न वा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी विद्यालयमै आएर रकम तिर्न दबाव दिने गरेका छन्। ।
सबै कक्षाका विद्यार्थीसँग २० देखि ३० हजार रुपियाँ माग गरेको ती अभिभावकले बताए । सत्याल पब्लिकेसनको पुस्तक प्रयोग गर्दै आएको सो विद्यालयले विद्यालय नजिकै, विद्यालयमै वा ठेगाना दिएअनुसारका स्थानमा किताब र्पुयाउने गरी पुस्तक लिन पनि दबाब दिएको छ ।
लकडाउनको समयमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिए कारबाही गर्ने सरकारी चेतावनीको बेवास्ता गर्दै सो विद्यालयले हाकाहाकी रुपमा शुल्क तिर्न र पुस्तक खरिद गर्न दवाव दिएर सकारलाई नै चुनौती दिएको हो ।
हिमालयन ह्वाइट हाउसका मालिक शर्मा विवादित मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको सचिवालयको विचौलियाको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले देशव्यापी कोरोना महामारी फैलन लागेको र आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प भएको अवस्थामा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले वार्षिक शुल्क उठाउन नहुने बताए ।
उनले यो अवस्थामा शुल्क तिर्न कसैले दबाव दिएमा मन्त्रालयमा सम्पर्क राखेमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए । हिमालयन ह्वाइट हाउसका अभिभावकले मन्त्रालयमा उजुरी गरे कारबाही हुन सक्ने संभावना छ ।